भारतको मेदान्त अस्पतालमा कार्यरत नेपाली चिकित्सक डा. सुजितले गरे आ’त्मह’त्या – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/भारतको मेदान्त अस्पतालमा कार्यरत नेपाली चिकित्सक डा. सुजितले गरे आ’त्मह’त्या
काठमाडौँ– भारतको मेदान्त अस्पतालमा कार्यरत रो’बोटिक कलेजो प्र’त्यारोपणका विशेषज्ञ नेपाली चिकित्सक डा. सुजित कुमार साहले आ’त्मह’त्या गरेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ४० वर्षीय साहले मंगलबार आफू बस्दै आएको गुडगाँउको अ’र्पाटमेन्टको आठौं तलाबाट हा’म
फा’लेर आ’त्मह’त्या गरेका हुन्। घ’टनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी घ’रेलु स’मस्याका कारण डा. साहले आ’त्मह’त्या गरेको हुनसक्ने बताएको छ डा. साहका परिवार भारतको हि’मान्चल प्रदेशमा बस्दै आएका छन्, भने उनकी श्रीमती र ६ वर्षकी छोरी पश्चिम बंगालमा बस्दै आएकी छन्।
उनी केही समययता श्रीमतीसँग छु’ट्टीएर बस्दै आएका थिए। उनले तीन वर्षदेखि मेदान्त अस्पतालमा रो’बोटिक लि’भर ट्रा’न्सप्लान्ट स’र्जनका रुपमा काम गर्दै आइरहेका थिए। उनले पोखराको म’णिपाल मेडिकल कलेजबाट ए’मबीबीएस तह पूरा
गरेपछि भारतको च’न्डीगढबाट ए’मएस तह पास गरेका थिए। त्योपछि डा. साहले भारतको एम्स कलेजबाट ए’मसीएच तह पूरा गरेर क’लेजो प्र’त्यारोपण विज्ञ चिकित्सकका रुपमा काम गर्न था’लेका थिए।
युएईमा ५ सय जनालाई रोजगारी अवसर, शुन्य लागतमा जान चाहनेको लागि उपयुक्त अवसर
avigationToggle navigation “गाडी गड्याङग, गुडुङ गर्दै भिरबाट खस्यो , म त्रिशुलीमा पौडी” खेलेर बाहिर निस्किँए, श्रीमती र छोरीलाई निकाल्न सकिन”।दु:खद ।।